Ungamisa kanjani ugaxekile lwesiShayina kusukela ku-Flooding iPhone yakho? Iseluleko Esivela ku-Semalt
Cishe uyazi ukubaluleka kokusebenzisa amaphasiwedi aqinile futhi usebenze ukuqinisekiswa kokubili kwezinto (2FA) kumadivayisi wakho we-Apple. Amakhulu kuya kwezinkulungwane zemilayezo yama-spam engadingekile yamaShayina athunyelwa futhi evela kumadivayisi e-iPhone. I-akhawunti ye-iMessage ekhokhisiwe ingase igcwalise i-iPad yakho, i-iPhone, i-Mac noma amanye amadivaysi afanayo anezinhlanzi eziningi futhi i-gobbledygook elula kunakho ongacabanga. Ukukhuluma ngokweqile, akuyona into ephazamisayo kodwa kuyisibonakaliso sokuthi othile uqagele iphasiwedi yakho futhi usebenzisa idivayisi yakho ngemisebenzi yakhe yobuwula.
U-Andrew Dyhan, isazi esiphezulu esivela ku Semalt , uye wavumelana nezinkinga ezizokwenza ukuthi uhlale uphephile kulokhu kuhlaselwa.
Inamba enkulu yabasebenzisi iwile isisulu kumacebo anjalo. Inkampani evikelekile yase-England e-Sophos yashicilela okuthunyelwe kubhulogi le-Naked Security, lapho yabelana khona nakho kwabasebenzisi be-iPhone abahlukile. Omunye wabasebenzisi wathi i-iPhone yakhe isetshenziswe ngokungemthetho ukuthumela imilayezo yamaShayina engalungile kubo bonke abangane bakhe namalungu omndeni. Ayikho umbiko wephulwa kwedatha okwake kwabikwa, futhi ayikho indlela yokukhipha iphasiwedi yomuntu kusuka kumadivayisi akhe we-iOS. Ezimweni ezinjalo, kungenzeka ukuthi akunakwenzeka ukuthi noma ubani angasho ukuthi kwenzekani, kodwa i-Apple Inc. iqalile uJohn Munn waseBelfast ekufingqa inkinga, ethi abasebenzisi be-Android bakhononda ngalolu daba iminyaka..Amaphasiwedi amaningi e-iPhone ayaqagela, futhi ama-akhawunti aphikisiwe nsuku zonke. UJohn wayengeyena kuphela isisulu njengoba uSophos uphenya ngale ndaba futhi wathola ukuthi i-Apple ayitholanga isikhalazo mayelana nophenyo lwayo futhi selivele lalungisa izinkinga eziningi.
Ukuhlasela kusebenza kanjani?
Okokuqala, abasebenzisi bathola umyalezo othi ama-ID wabo we-Apple atholakale ezindaweni ezingaziwa noma kumadivayisi. Uma uthola izaziso ezinjalo kwikhompyutha yakho, akukho lutho ongakwenza. Kodwa uma uthola umlayezo onjalo efonini yakho ephathekayo, kufanele uchofoze inkinobho OK. Noma ngabe yikuphi, uma umyalezo wokuqala utholakele, uzamcolo uzoqala. Inombolo enkulu yamadivaysi agxiliwe nsuku zonke. Abasebenzisi futhi bakhononda nge-emojis nemibhalo evela emithonjeni esolisayo, futhi leyo milayezo ibhaliwe ngokuphelele ngolimi lwesiShayina.
Izinhlobo ezifanayo zemilayezo zithunyelwa ezinkulungwaneni zabantu ezivela kuma-akhawunti anesifo. Uma uhumusha leyo milayezo, bangase bakutshele ekhasino noma ebusuku e-Macau. Kunamathuba ukuthi abaduni bafuna ukweba imininingwane yakho ngokusebenzisa amagama amakhasino adumile, kodwa imisebenzi enjalo iyoholela kumabhuloki angenayo egaxekile. Uma ithi "ulwazi oluthe xaxa," kusho ukuthi abahlaseli bafinyelele iphasiwedi yakho noma bathathe idatha yakho ukuphula imithetho ethile ku-intanethi. I-Apple ithi ayikwazi ukufinyelela i-akhawunti yeMessage yomsebenzisi, kodwa abaduni bavame ukukhohlisa abasebenzisi bese baqondisa kabusha emalini engakaze ibe khona. Amathuba ukuthi umsebenzisi ubekwe eceleni amaphasiwedi awo kokuphulwa kwedatha, njenge-LinkedIn ne-Yahoo. Kungenzeka basebenzise iphasiwedi efanayo yama-akhawunti ahlukene, uvumela abaduni ukuba bafanise ama-ID e-imeyili ahlukile ngephasiwedi efanayo. Ekuphetheni, kufanele usebenzise amaphasiwedi aqinile angase angaqaphelwa abaduni. Kufanele ubuyekeze amaphasiwedi wakho njalo futhi ugcine i-2FA isebenze. Uma unenkinga ethile mayelana nokuphepha kwe-akhawunti yakho, kufanele uhlole izincomo zika-Apple Source .